निर्मल उता मलेसियामा बेपत्ता,यता नेपालमा इन्डोनेसियन श्रिमतिको बिच्चली !
क्वालालम्पुर- (मलेसिया): वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मलेसियामा कार्यरत झापा मेचिनगरका-३ स्थायीबासी निर्मल पोख्रेल परिवार बाट सम्पर्क बिहिन भएका छन। रोजगारीको शिलसिलामा ३ बर्ष अघि मलेसिया आईपुगेका निर्मल गत जुलाई ६ तारिक बाट एकएक सम्पर्क बिहिन बन्न पुगेका हुन।
करिब ३ महिना यता निर्मल आफ्ना आफन्त साथी भाइ कोहि संग पनि सम्पर्कमा नरहेको उनकी श्रीमती अनि पोख्रेलले बताईन।अनि हाल झापा मेचिनगरमै निर्मलको फोन कुरेर बसिरहेकि छिन। कोरोना भाईरसले गर्दा घर ब्याबहार चलाउन एकदम समस्या छ।कमाउन गएका मान्छेले खर्च नपठाई दिदा र सम्पर्क बिहिन हुदा उतिकै मानसिक तनाब बढेको छ।”अनिले फोन सम्पर्कमा भनिन”।
छोरो ८ कक्षामा पढ्दै छ बिध्यालयको फी र अध्यनका लागि आवस्यक सामाग्री किन्न खर्च छैन, निर्मल सम्पर्कमा नआए देखि पसलहरुमा उधारो सामान दिनै छाडे त्यसमाथि म इन्डोनेशियाकि छोरी परे के गर्ने कसो गर्ने? माइत फर्कौ भने कुनै बाटो छैन।’उनले थपिन’।